လင်ကွန်း၊ ကားလ်မာ့က်စ် နဲ့ ဗြိတိသျှအလုပ်သမားများအကြား သွေးစည်းမှု (မြစမ်းအေး) | Communist Party of Burma
လင်ကွန်း၊ ကားလ်မာ့က်စ် နဲ့ ဗြိတိသျှအလုပ်သမားများအကြား သွေးစည်းမှု
စာမျက်နှာ ၄၀၅ မျက်နှာရှိ အေဗဟင်လင်ကွန်းရဲ့ ရေးသားချက်နဲ့မိန့်ခွန်းများဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲမှာ ဇန္နဝါရီ ၁၉၊ ၁၈၆၃ ရက်စွဲနဲ့ ပေးစာတစောင်ပါရှိပါတယ်။ “မန်ချက်စတာ အင်္ဂလန်အလုပ်သမားများသို့”လို့ လိပ်မူပြီး ‘ယခုလအစောပိုင်းမှာ ကျွန်ုပ်ထံ ပေးပို့လိုက်သော သင်တို့၏ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုချက်များနှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်များကို လက်ခံရရှိတဲ့အတွက် အသိအမှတ်ပြု ဂုဏ်ယူပါတယ်’ လို့ အစချီထားပါတယ်။ ဒီစာမှာ လင်ကွန်းက မန်ချက်စတာ ချည်စက်အလုပ်သမားများရဲ့ မုန်တိုင်းထန်သော ၁၈၆၂ နှစ်ကုန် ပိုင်းမှာကျင်းပခဲ့တဲ့ လွတ်လပ်စွာကုန်သွယ်ရေး မြို့တော်ခန်းမဆောင်ညီလာခံဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရည်ညွှန်းပြောဆိုတာဖြစ်တယ်။
(တောင်ပိုင်းခွဲထွက်)ကွန်ဖက်ဒရေစီများရဲ့ အတ္တလန်တိတ်ဆိပ်ကမ်းများကို (မြောက်ပိုင်းယူနီယံ) ပြည်ထောင်စုတပ်များကပိတ်ဆို့ထားမှုကို ထောက်ခံတဲ့အနေနဲ့ တောင်ပိုင်းကျွန်တွေ စိုက်ပျိုးဆွတ်ခူးပေးရတဲ့ ဝါဂွမ်းထုပ်တွေကို (အင်္ဂလိပ်အလုပ်သမားများက) သယ်ပို့ပေးဖို့ ငြင်းဆန်တာဖြစ်တယ်။ ထိုစဉ်က ဗြိတိသျှနန်းရင်းဝန် လော့ပါမာစတန် Lord Palmerston က ဗြိတိသျှ ချည်စက်ပိုင်ရှင်များနဲ့ သင်္ဘောကုမ္ပဏီများရဲ့တောင်းဆိုချက်အတိုင်း ပိတ်ဆို့မှုအား အင်အားသုံးဖြိုခွဲဖို့ တော်ဝင်ရေတပ်ကိုအမိန့်ပေးတယ်။
ကျွန်ပြည်နယ်များအပေါ် အမှီပြုကာ တင်သွင်းလာတဲ့ဝါဂွမ်းထုပ်များ ပြတ်လပ်မှုကြောင့် ထိခိုက်နေတဲ့ ဗြိတိသျှချည်ထည်လုပ်ငန်းရဲ့အနာဂတ်ကို ပုံမှန်အတိုင်း ပြန်ဖြစ်စေဖို့ ဖြစ်တယ်။
(အင်္ဂလန်နိုင်ငံ) Lancashire ကို ဗဟိုပြုထားတဲ့ အထည်အလိပ်စက်မှုလုပ်ငန်းဟာ ကမ္ဘာမှာအကြီးဆုံးဖြစ်ပြီး အမေရိကန်ပြည်တွင်းစစ်မတိုင်မီက ဝါဂွမ်းအားလုံးရဲ့ လေးပုံသုံးပုံဟာလည်း အမေရိကန်တောင်ပိုင်းပြည်နယ်များမှ ထုတ်လုပ်တာဖြစ်တယ်။ ပိတ်ဆို့မှု တနှစ်တာကာလအတွင်း ရက်ကန်းစင်နှင့်ချည်ရစ်တံများ ရပ်နားထားရသဖြင့် စက်မှုထုတ်လုပ်ရေးရဲ့ ၆၀% ထိခိုက်ခဲ့ပြီး အလုပ်သမားအများအပြား ဆင်းရဲကျပ်တည်း ဒုက္ခရောက်ကြရတယ်။ သို့ပင်ဖြစ်သော်ငြားလည်း မန်ချက်စတာအလုပ်သမားထုဟာ ကွန်ဖက်ဒရေစီ (ကျွန်စနစ်) ဖျက်သိမ်းရေး အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုစစ်ပွဲနဲ့အတူ သွေးစည်းညီညွတ်စွာ ရပ်တည်ခဲ့တယ်။
လင်ကွန်းက ယခုလိုရေးသားတယ်။ “အကျပ်အတည်းကြားက သည်းခံအားပေးခဲ့ကြတဲ့ မန်ချက်စတာနဲ့ဥရောပတခွင်က အလုပ်သမားများရဲ့ ဒုက္ခအဖုံဖုံကို ကျွန်ပ်အနေဖြင့် အလေးအနက် စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်”။
သူက ယခုလိုဆက်ပြောတယ် “ဒီဖြစ်ရပ်များအရ သင်တို့ရဲ့ အရေးပါတဲ့ထုတ်ဖော်ချက်များဟာ ဘယ်ခေတ်ဘယ်နိုင်ငံမှာမှ နှိပ်ကွပ်လို့မရနိုင်တဲ့ မြင့်မြတ်တဲ့ ခရစ်ယာန်သူရဲကောင်းဝါဒပမာ ကျွန်ပ်မှတ်ယူသွားပါမယ် “။
ထင်သာမြင်သာ အကြောင်းများကြောင့် ဒီအံ့အားသင့်စရာကောင်းတဲ့ ဖြစ်ရပ်များကို ဗြိတိသျှကျောင်းများမှာ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်မသင်ကြားတာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ၁၈၆၂ ခုနှစ်ပိုင်းမှာ ပြည်ထောင်စုသမားတွေ(ယူနီယံတွေ) ရှုံးနိမ့်နေချိန်မှာ ပါမာစတန်နဲ့ သူ့အစိုးရအဖွဲ့ဟာ ကွန်ဖက်ဒရေစီသမားတွေရဲ့ လွတ်လပ်ရေးနဲ့အချုပ်အခြာပိုင်မှုကို အသိအမှတ်ပြုဖို့ အလေးအနက် စဉ်းစားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းကြောင့်လည်း မဟုတ်ပါဘူး။
(ယူနီယံတွေဟာ) First Bull Run, Manassas, Fredericksburg အပါအဝင် တိုက်ပွဲတသီကြီး ရှုံးနိမ့်ခဲ့တဲ့အတွက် တည်ဆဲအုပ်စိုးသူအများအပြားက အတ္တလန်တိတ်တဖက်ကမ်း ပြိုင်ဘက်နှင့် စီးပွားရေးအင်အား ရေတပ်အင်အား တစုံတရာအားနည်းကြောင်း ပြသရာ ရောက်တဲ့အတွက် ဒီအချက်ကို အသိအမှတ်ပြုဖို့ တိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။
ဗြိတိန်အနေနဲ့ တောင်ပိုင်းကို လက်နက်ထောက်ပံ့ပြီး ပြည်တွင်းစစ်ကို ထိထိရောက်ရောက် စွက်ဖက်ဖို့ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။
တကယ်တော့ ကျွန်စနစ်ဆန့်ကျင်ရေးအတွက် မန်ချက်စတာချည်စက် အလုပ်သမားများနဲ့ (အမေရိကန်) ပြည်ထောင်စုသမားများ သွေးစည်းညီညွတ်မှုဟာ လင်ကွန်းကောင်းချီးပေးတဲ့ မြင့်မြတ်တဲ့သူရဲကောင်းဝါဒပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတန်ဖိုးရှိတဲ့ထောက်ခံအားပေးမှုက ထူးခြားတဲ့ဆက်ဆံရေးကို ဖော်ညွှန်းနေတယ်။
လင်ကွန်းက ယခုလို စဉ်းစားခဲ့ပါလိမ့်မယ်။ “ယခုလို အပြန်အလှန် နားလည်ခံစားမှုကို ကျွန်ုပ်ထောပနာပြုပါတယ်။ နိမိတ်ဖတ်တဲ့အနေနဲ့ကျွန်ပ်ပြောလိုတာက သင်တို့နိုင်ငံနဲ့ ကျွန်ပ်တို့နိုင်ငံအပေါ် ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဘယ်လိုကံဆိုးမိုးမှောင်ပဲ ကျရောက်နေနေ နှစ်နိုင်ငံအကြား ယခုတည်ရှိနေတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ချစ်ကြည်ရေးဟာ ထာဝစဉ်တည်တံ့နေဖို့ ကျွန်ပ်ဆန္ဒရှိပါတယ်”။
ဒါပေမဲ့ လင်ကွန်းဟာ ထူးခြားစံထားလောက်တဲ့ သမိုင်းဝင်အိတ်ဖွင့်ပေးစာဖြင့် မန်ချက်စတာ အလုပ်သမားများရဲ့ ရပ်တည်ချက်အပေါ် ချီးကျူးထောပနာပြုရုံတင်မကဘူး။ များမကြာမီမှာ သူတို့ရဲ့အခက်အခဲကို ကူညီပံ့ပိုးတဲ့အနေနဲ့ လီဗာပူသို့ ထောက်ပံ့ရေး ရိက္ခာတင်သင်္ဘောများ စေလွှတ်ပေးပို့ခဲ့ပါတယ်။
အတ္တလန်တိတ်သမုဒ္ဒရာ တဖက်တချက်လှုပ်ခတ်သွားတဲ့ ကမ္ဘာ့သမိုင်းဝင် ကျွန်စနစ်ဖျက်သိမ်းရေးတိုက်ပွဲမှာ ဖယ်ချန်ထားလို့မရသူ နှစ်ဦးကတော့ မာ့က်စ်နဲ့အိန်ဂယ် ဖြစ်ပါတယ်။
၁၈၆၀ ခုနှစ် မာ့က်စ်မှ အိန်ဂယ်ထံပေးစာတစောင်မှာ ယခုလို ဖော်ပြထားတယ်။ “ယနေ့ကမ္ဘာမှာ ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ အကြီးမားဆုံး ဖြစ်ရပ်နှစ်ခုက ဂျွန်ဘရောင်းသေဆုံးမှုမှအစပြုလာတဲ့ အမေရိကား ကျွန်လှုပ်ရှားမှုနဲ့ ရုရှားမြေကျွန်လှုပ်ရှားမှုလို့ ကျွန်တော်ထင်တယ်”။
၅ နှစ်အကြာမှာ မာက့်စ်ဟာ နိုင်ငံတကာအလုပ်သမားအဖွဲ့ချုပ် ပထမအင်တာနေရှင်နယ် ခေါင်းဆောင်အနေဖြင့် လင်ကွန်းထံသို့ သမ္မတထပ်မံအရွေးချယ်ခံရမှုအပေါ် ပေးစာတစောင် ပေးပို့ခဲ့တယ်။
“လူကြီးမင်းခင်ဗျား – လူကြီးမင်းရဲ့ ကြီးမားတဲ့အများစုမဲဖြင့် ထပ်မံအနိုင်ရရှိမှုအပေါ် အမေရိကန်ပြည်သူများအား ချီးကျူးဂုဏ်ပြု အပ်ပါတယ်။ အကယ်၍ ကျွန်ပြုအာဏာကို ခုခံဆန့်ကျင်ရေးဟာ လူကြီးမင်းရဲ့ ပထမအကြိမ်ရွေးကောက်ပွဲ အောင်နိုင်ရေးကြွေးကြော်သံရဲ့ ရလဒ်ဖြစ်ခဲ့ရင်၊ ဒုတိယအကြိမ်ရွေးကောက်ပွဲ တိုက်ပွဲခေါ်သံဟာ (ကျွန်စနစ်ဖျက်သိမ်းပစ်) ဖြစ်ပါတယ်”။
“ကျွန်စနစ်ဖျက်သိမ်းပစ်” ဆိုတာဟာ မန်ချက်စတာ အလုပ်သမားထုမှ ထောက်ခံပေးပို့လိုက်တဲ့ သတင်းစကားဖြစ်ပါတယ်။
ရည်ညွှန်း။ Anti-slavery solidarity united Abraham Lincoln, Karl Marx, and British Workers. By John weight. Civil War In The United States, Karl Marx & Friedrich Engels.
မြစမ်းအေး (၉ ဇူလိုင် ၂၀၂၀)
← ကာချုပ်ရဲ့ ဒီလိုသဘောထားမျိုးနဲ့ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးရဖို့ ဝေးလွန်းပါတယ် (ကိုထွေး) တက္ကသိုလ်ရာပြည့် ရောက်တော့မယ် (ခင်မောင်ဝင်း) →